एमाले मैदानमा जवाफ दिनेगरि तयारीमा छः योगेश भट्टराई - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एमाले मैदानमा जवाफ दिनेगरि तयारीमा छः योगेश भट्टराई
नेकपा एमाले आजदेखि मेची–महाकाली अभियानमा हिडेको छ । अध्यक्षसहित उच्चतहका नेता, केन्द्रीय नेतादेखि हजारौ कार्यकर्ता तराई झरेका छन् । मेची महाकाली अभियानमा एमालेले गरेको तयारीका विषयमा इटहरीमा रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईसँग नेपालपाटीले गरेको छोटो टेलिफोन कुराकानी
मेची–महाकाली अभियानको तयारी पुरा भयो ?
सबै हिवासले तयारी पुरा भइसकेको छ । अब सिंगो एमाले अभियानमा केन्द्रित भएको छ । शनिबार मेचीपुलबाट अभियानको सुरु हुनेछ ।
अभियान चुनाव प्रचारका लागि हो ?
होइन । यो राष्ट्रियता, संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, समृद्धि, स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकताका र सामाजिक सद्भावका लागि हो । हामी अभियानको नारामा नै भनेका छौ । तर एमालेका एजेण्डा र कार्यक्रमलाई अभियानका क्रममा जनतालाई जानकारी गराउने भएकाले चुनावका विषयमा पनि केन्द्रित रहन्छ ।
कति नेता कार्यकर्ता अभियानमा सहभागि हुँदैछन् ?
एमालेका अध्यक्ष शीर्ष तहका नेताहरुसहित सबै नेताहरु पनि अभियानमा छन् । अभियान भरीमा एमालेको ठूलो पक्ति सहभागि हुनेछ । तर अभियानको उदघाटनदेखि अन्त्यसम्म १ हजार नेता कार्यकर्ता सधैसँगै रहनेछन् । जनताका हिसावले ५० लाख मान्छे अभियानका सहभागि हुनेछन् ।
अभियानमा पर्ने कति जिल्लामा कतिवटा कार्यक्रम हुन्छन् ?
झापाको मेचीबाट सुरु हुने अभियानमा तराईका सबै जिल्लाहरु पर्नेछन् । ३३ ठाउँमा सभागर्ने एमालेले पहिले नै कार्यक्रम तय गरेको छ । निश्चित रुट पनि बनाइएको छ । त्यही रुट अनुसार अभियान अगाडी बढ्नेछ । प्रत्येक आमसभामा कम्तीमा २० हजारदेखि बढीमा १ लाखसम्म जनता सहभागी गराइनेछ । मैले अघि भने अभियानभर कम्तीमा ५० लाख मान्छे सहभागि हुनेछन् ।
यो शक्ति प्रदर्शन हो ?
होइन । यसमा एमालेले निश्चित उद्देश्य लिएको छ । त्यसका विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने आबश्यकताका आधारमा यो तय गरिएको हो । कसैले यसलाई शक्ति प्रदर्शन बुझ्न पनि सक्ला । तर यो विशुद्ध एउटा अभियान हो ।
त्यतिका मान्छेलाई खाना चै कसले खुवाउछ ?
हामीले खानपानका लागि पनि त्यसै अनुसारको ब्यवस्था मिलाएका छौ । हरेक आमसभामा ५ सय मान्छेका घरमा खाना खानेगरि व्यवस्था मिलाइएको छ । एक घरमा दुई जनाका दरले खाना खुवाइनेछ । कतै सामुहिक खानपिनको ब्यवस्था पनि मिलाइएको छ । नेता–कार्यकर्ता सामूहिक खानपान र आवासमा रहनेछन, जनताको पार्टी भएकाले जनताकै बीचमा रहने गरी सबै तयारी पूरा भएको छ । हरेक ठाउँका स्थानिय पार्टी कमिटीले ब्यवस्था मिलाएको छ ।
मधेसमा अभियान विथोल्ने तयारी छ सुरक्षा दस्ता पनि आफ्नै छ ?
सुरक्षाको कुरा राज्यको हो । हामीले संविधान, नीति विधीसंगत कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सरकारलाई कार्यक्रमका विषयमा र सुरक्षाका विषयमा जानकारी गराइसकेका छौ । सुरक्षा दिने काम राज्यको हो । अर्को कुरा एमालेका कार्यक्रम, एजेण्डाका विषयमा कसैको असहमति छ भने हरेकले आमसभा मार्फत वा कुनैपनि हिसावले जनताका बिचमा राख्न पाउने अधिकार छ । हामी त्यसलाई स्वागत नै गछौ ।
तर यदी एमाले कार्यकर्तालाई लखेट्छौ भन्ने हिसावले कसैले सोचेको छ । त्यस्तोे कार्यक्रम बनाएको छ भने त्यसको जवाफ दिन एमालेले पनि जानेको छ । सुरक्षाका लागि अभियानभर छुट्टै दस्ता पनि रहनेछ । अवरोध खडा गर्नु, बिथोल्न खोजे असंवैधानिक, गैरकानुनी र उद्दण्ड व्यवहार गर्न खोजे स्थलगत रुपमा नै शसक्त प्रतिवाद नै हुनेछ ।